KDE Plasma: DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်သနည်း။ | Linux မှ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခါအားလျော်စွာနောက်ဆုံးထုတ်သတင်းများကိုထုတ်ဝေသည် KDE ပလာစမာ (5.17, 5.16, 5.15, 5.14, အခြားသူများအကြား), ဒါမှမဟုတ်တချို့ပေါ်မှာ အကွောငျး က၏ဒီကဗျာ, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ app ကပြောသည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်.
KDE Plasma တခြားသူတွေလိုပဲ Desktop Environments (DE) သူ့အပေါ်အသက်တာကိုဖြစ်စေသည် GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်, ဒါဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖြစ်ခြင်းအဘို့, အသုံးအများဆုံးတစ်ခုဖြစ်လာသည်သောဒေတာအဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် လှပ၊ အလင်း၊ ပြည့်စုံပြီးအလုပ်လုပ်ခြင်း.
၎င်း၏လက်ရှိကနေ5ဗားရှင်း, ၏အမည်အားဖြင့်လူသိများသည် plasma။ ထိုအတူတူဘာလဲ GNOME တူလာတယ် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် များစွာသော၏ default အ (default) GNU / Linux Distros.
1 အားလုံး Plasma အကြောင်း
1.3.4 CLI မှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်ခြင်း၏အခြားတရားဝင်မူကွဲ ၂ ခု
အားလုံး Plasma အကြောင်း
KDE မိမိအခုနှစ် 1.0 ဗားရှင်း ၏နေ့စွဲအပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 12 က de Julio က de 1998 နှင့်၎င်း၏လက်ရှိ၌တည်၏5ဗားရှင်းအဖြစ်လူသိများ KDE Plasma အပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 15 က de Julio က de 2014.
ဒါဟာလက်ရှိဖြစ်ပါတယ် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် တစ် ဦး ပေးရန်ရည်ရွယ်သည် အသစ်ပြန်လည်ကြည့်ရှုအတွေ့အကြုံ မည်သည့်အသုံးပြုသူအတွက်မဆိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း။
ရှေ့ ဦး စွာမှစ။ သူအာရုံစိုက်ခဲ့သည် အသုံးပြုသူအတွက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဒိုမိန်းလွယ်ကူချောမွေ့ ၎င်းတွင်ပါဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များအနက်တစ် သန့်ရှင်းသောအသွင်အပြင်နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖတ်နိုင်အောင် (တင်ပြ), ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ပေး အသစ်ပြုပြင်ထားသောအပြန်အလှန်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ၊ ခေတ်မီခြင်းနှင့်သန့်စင်.
သင်တို့၏နာမ (KDE) များအတွက်အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ် "Kool desktop ကိုပတ်ဝန်းကျင်"။ ဒါဟာလုံးဝစင်ကြယ်သော၏ဖွင့်ထားသည် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် (FRee နဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲ - FOSS) ။
ဒါဟာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ် KDE စီမံကိန်း အရာပေါ်တွင်မူတည်သည် KDE အဖွဲ့အစည်း။ ထိုသို့ကိရိယာတန်ဆာပလာအပေါ်အခြေခံသည် QT.
ဒါဟာနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပေါင်းစည်းမှုရှိပါတယ် X ဝင်းဒိုးစနစ်ပြသမှုဆာဗာနှင့်ကောင်းသောထောက်ခံမှုနှင့်ပေါင်းစည်းမှုရှိပါတယ် ဝိန်းလန်း အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းအတာအထိ ဒscမကိန်းချုံ့ချဲ့သို့မဟုတ်တစ်နည်းပြောရလျှင်၎င်းသည် desktop ၏ပြတင်းပေါက်များ၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ ဖောင့်များနှင့်ပြားများ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏အရွယ်အစားကိုပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြင့်ညှိနှိုင်းပေးသည်။ မင်္ဂလာပါ.
လက်ရှိထွက်ထင်ရှားပေါ်လွင်သောဝိသေသလက္ခဏာများအနက်၎င်း၏ဖြစ်ပါသည် လှပပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ စာရေးခုံ နှင့်၎င်း၏ application များ၏ကြီးမားသောဂေဟစနစ်။ ထိုအကြားမှဖြစ်ပါတယ် အလွန်ပေါ့ပါးပြီးအရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည် အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ရန်။
၏လက်ရှိတည်ငြိမ်ဗားရှင်း GNOME Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ဗားရှင်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ် 5.17.
တစ်ခုလုံလောက် ကောင်းစွာစနစ်တကျစာရွက်စာတမ်းများ နှင့်အွန်လိုင်း updated ။
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြည့်စုံခြင်းနှင့် tools များ၏ updated ဂေဟစနစ် နှင့် applications များ။
una အသုံးပြုသူများနှင့်ပံ့ပိုးများ၏communityရာမအသိုင်းအဝိုင်း ခိုင်မာတဲ့အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်းကကျောထောက်နောက်ခံပြု။
Graphical User Interface (GUI) အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက်Windows နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ GNOME နှင့်အခြားလူသိများသောအခြားများထက်ပိုသည်။
ဒါဟာများသောအားဖြင့်စဉ်းစားသည် Desktop Environment ကိုစားသုံးသူအများဆုံးအရင်းအမြစ်အများဆုံးထို့နောက် GNOME ။
အများအားဖြင့် ဂရပ်ဖစ်ကဒ်တစ်ခုလိုအပ်သည် လှပပြီးအစွမ်းထက်သော Graphic User Interface ကိုလှပပြီးပြသရန်ကောင်းမွန်သော graphical power ဖြစ်သည် (GUI) ။
မသန်စွမ်း ပိုမိုသိရှိရန် တူညီသောမှသင်သည်အောက်ပါဝဘ်လင့်များကိုကြည့်နိုင်သည်။
KDE Plasma တရားဝင်ပုဒ်မ
ရွေးပါ KDE Plasma Desktop Environment နှင့်အခြား utility ကိုသို့မဟုတ်အပိုဆောင်း packages များအစုံ။
မှတ်စု: အပေါ်မှာအခြေခံပြီး Desktop Environment ကိုလည်း install လုပ်နိုင်ပါတယ် KDE Plasma အထုပ်အစားထိုးခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်းသောသို့မဟုတ်ပြီးပြည့်စုံ kde-plasma-desktop အားဖြင့် plasma-desktop, kde-standard o kde-full.
CLI မှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်ခြင်း၏အခြားတရားဝင်မူကွဲ ၂ ခု
ကိုရွေးပြီး Reboot လုပ်ပါ KDE Plasma Desktop Environmentတစ် ဦး ထက်ပိုသောရှိခြင်း၏အမှု၌ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် installed နှင့်မရွေးချယ်ဘဲလျက် SDDM ဝင်မည်မန်နေဂျာ.
မှတ်စု: စမ်းသပ်ပြီးနောက် KDE Plasma Desktop Environment ထည့်သွင်းပြီးသား၊ အပိုဆောင်းဇာတိအက်ပ်များနှင့်လိုအပ်သောပလပ်ဂင်များ ဥပမာအားဖြင့်ဥပမာ -
သတိရပါ၊ ဒုတိယ post အကြောင်းကိုစီးရီး၏ GNU / Linux Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ။ ပထမအကြောင်းပါ GNOME လာမယ့်တ ဦး တည်းအကြောင်းကိုဖြစ်လိမ့်မည် XFCE ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Entorno de Escritorio» ၏နာမအားဖြင့်လူသိများ «KDE Plasma», ယခင်ကသာအဖြစ်လူသိများ «KDE», ၏ကမ္ဘာပေါ်မှာအသုံးအများဆုံးယနေ့အခြား «Distribuciones GNU/Linux»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » KDE Plasma: DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်သနည်း။
Jlendres ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်၏ Distro ၏ repositories တွင်သင်ရရှိနိုင်သောအရာကို install လုပ်လိမ့်မည်။
"လက်ရှိတည်ငြိမ်သော GNOME Desktop Environment သည်ဗားရှင်းနံပါတ် ၅၁၇ ဖြစ်သည်။ "
မင်္ဂလာပါ။ သင်၏မှတ်ချက်သည်အလွန်မှန်ကန်သည်။ ဆောင်းပါးအတွင်းရှိ link မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုသူများအတွက်သတင်းနှင့်သတင်းကိုမေးထားသောမေးခွန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ဝေမှု - Plasma 5.17.5 ၏လွှတ်တင်ခြင်းကြေငြာချက်များ ( https://kde.org/announcements/plasma-5.17.5.php?site_locale=es ).
မင်္ဂလာပါ၊ ဆိုလိုတာကဆောင်းပါးသည် desktop ၏ "GNOME" ၏တည်ငြိမ်သော version ကိုထည့်ပြီး KDE ကိုထည့်သင့်သည်။